Rudzi: Kutaurirana kwefoni
Chivakidzani 841 chinowirirana neguta ripi? Ndechipi chivakamberi chaunofarira? Bumbiro rerunhare? 841 Penza dunhu (8412) xx-xx-xx Penza (84140) x-xx-xx Bessonovka (84141) x-xx-xx Bekovo (84142) x-xx-xx Vadinsk (84143) x-xx-xx Bashmakovo (84144) ) ...
Kazakhstani embassy muOmsk. Mhoro. Ini ndinokumbira iwe kuti utibatsire isu mwanasikana wangu anogara muSamara B-Chernihiv dunhu asina magwaro chete mumaoko ake gwaro rekuzvarwa reKazakhstan uye chitupa chekuzivikanwa ...
Beeline-moscow yakachinja mutero wangu wekutaurirana chikara-2007 sms inodhura gumi rubles! ndokumbira unditaurire imwe yakanaka tariff 10 yekubatsira 0611. Beeline tariff zvirongwa - zvinobatsira zvitsva mutero ... sim1.rushop / beeline / tariffs / 24. Mitengo yakanyanya kunaka ...
/ Ungachinja sei mapoinzi mum mts kune megabytes eInternet? Maitiro ekuchinjana MTS mapoinzi eInternet Chinangwa chevhisi sarudzo Makumi mashanu Megabytes (50MB). Huwandu hwemabhonasi hunodiwa kuti ishandise sevhisi iri zana e150. Kodhi yebasa ...
Zvinoita here kuendesa mari kubva kuIota? Iwe haugone kuendesa chero kupi, kubhadhara neyota, uye Mwari ngavarambe iwe ukaisa mari imomo nekukanganisa, hauzoidzosa ... kana kuti ichave yakareba uye ...
Nzira yekufonera Latvia +371 ** *** *** Nhamba dzenhare muLatvia dzine manhamba masere ekutanga maviri, kodhi yekufambisa nhare, inotevera nhamba nhare nharembozha Nharembozha Network Network NMT8Mobile ...
uri kupi musha weProstokvashino? kwete katuni asi chaiye Russia, Nizhny Novgorod dunhu, musha weProstokvashino - ichi chinhu chimwe chete icho Yandex mamepu eTynda, Rostov, Moscow neLeningrad matunhu anoziva. Russia, Nizhny Novgorod dunhu, dunhu reTonkin, ...
Vanhu !!! ndiani anoziva kodhi opareta 351 uye munzvimbo ipi iri ...
Vanhu !!! ndiani anoziva kuti kodhi ndeipi 351 uye mune nharaunda ipi ... Chelyabinsk Pano unoona zvinoitika kana iwe ukabvunza ruzivo nezve isina kukwana nhamba%:%: »%;! 5 ()%; nhamba ipi ??? kodhi + 7 ...
ndiani anoziva 494 ndiyo kodhi yeguta ripi? Kostroma (Russia) Kursk Fixed line - Kostroma region (8 494) Fixed line - Antropovo (8 49430) Fixed line - Bogovarovo (8 49451) Fixed line - Bui ...
Yota SIM kadhi yakawanda sei? Uye ndedzipi mitengo yekutaurirana, Internet, nezvimwe kune uyu anoshanda? 300 p. Asi Beeline neayo "ese" emitero yakabhadharwa inobhadhara. Nekuti haana kutanga ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pekunyora uye kunyoresa? ndiudze nzira huru yekusiyanisa .1. Musiyano uripo pakati pekunyora uye kunyoreswa. Muhupenyu hwezuva nezuva, mazwi ekuti "kunyoreswa" uye "kunyoreswa" anoshandiswa zvakafanana. Nekudaro, kubva pakuona zviri pamutemo, izvi ...
Mubvunzo kune avo vanogara muSt. Chii chinonzi "lit.", "pom." Zvinorevei mukero?
Mubvunzo kune avo vanogara muSt. Chii chinonzi "lit.", "pom." Zvinorevei mukero? lit-tsamba, pom-kamuri Alphanumeric chitupa chinoshandiswa mukugadzirira zvinyorwa uye zvinyorwa zvehunyanzvi zvezvivakwa nemasangano ehunyanzvi ekuverenga (OTI), zvinotenderwa ...
Ndiudze kero 125993 yeposvo hofisi muMoscow 125993, Moscow, Leningradskiy tarisiro, 37, A-167 GSP-3 Anodiwa, Mikhail! Webhusaiti yaMospochta INORAMBA KUVAPO kweichi index panguva ino IZVI! Zviri nyore kuona kuti ...
8805 ******* ndeupi opareta uye guta? Code (8) 805 prepaid kadhi kufona. Kodhi / Range / Kugona / Mushandi / Dunhu 8051000000100999910000 yenzvimbo refu-refu uye dzenhare dzekunze RostelecomMoscow 8051010000101999910000RostelecomRussian Federation 8051100000110999910000CountryComMoscow
906 inharaunda ipi iyi ndapota ndiudze kana urikutaura nezve nharembozha, saka ichi ndicho chirahwe, asi mumatunhu akasiyana muOrel mune akadaro Kana tiri kutaura nezverunhare +7 (906) xxxxxxx - paunofona ...
Ndeipi kodhi yepositi yeguta reKostroma? Usatarise paInternet Kostroma dunhu POSTAL CODES Guta reKostroma ... Magistralnaya mugwagwa - 156010Mira mugwagwa - 156019Maly lane - 156002Miroslavskaya mugwagwa - 156012Malyshkovo 371 km p - ...
4G inoenderana neSIM kadhi here? Zuva rakareruka. Yako SIM kadhi muSIZE haizokwani mafoni matsva 🙂Vs inofanirwa kuchinjwa. Kune salon iri padyo, chinja SIM kadhi rako, mahara, nhamba ichave yakafanana ...
Chii chinonzi faira yekuwedzera thumbdata3-1763508120. Foni inotora nzvimbo yese.
Chii chinonzi faira yekuwedzera thumbdata3-1763508120. Foni inotora nzvimbo yese. Ndeipi iyo .THUMBDATA3 faira fomati ye? Kuwedzeredzwa kweiyo fomu .thumbdata3-10 manhamba asina kujairika ndeyekuwedzera sevhisi inoshandiswa mukushanda ...
runhare 8923, iguta ripi iri? Iri harisi iro guta, asi nharembozha Megafon. Omsk Altai kana Tomsk Nezve nharembozha dzemaguta nevashandisi mumatunhu pane webhusaiti telcode.su Iyi nhare ...
Kurudzira kubatana kunobatsira kwekufona kubva kuKazakhstan kuenda kuRussia Ndezvipi zviripo zve11 tenge (vavakidzani) -kubva paminiti yekutanga uye yekupedzisira. 30 tenge imwe neimwe. Kubva Kukadzi 2016 ndakangotaura ...
Mibvunzo ye58 mu database yakagadzirwa mu 0,492 masekondi.